Home News Askari dad shacab ah ku dilay Muqdisho!
Askari dad shacab ah ku dilay Muqdisho!
Wararka naga soo gaaraya Isgoyska Taleex ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in Askari ka tirsan Ciidanka dowlada uu furay rasaas, waxaana ku dhawaacmay qof dumar ah oo la sheegay in ay Shaah ku iibinaysay Kaabiga Isgoyska Taleex.
Dhaawaca Haweenayda ayaa loo cararay Isbitaalka Daarul Shifa ee Muqdisho.
Askarta Ciidanka dowladda Soomaaliya waa ay kordheen bilihii ugu dambeeyay waxyeeladda ay u geysanayan dadka Shacabka, waxaana waxyeeladda ugu badan ay soo gaartaa dhalinyarada ka xeeya Gaadiidka Bajaajta.
Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa Saakay xiray qaar ka mid ah Wadooyinka Muqdisho, waxaana jira qaar ka mid ah Gaadiidleyda oo isku daayay in ay Wadada xoog ku Maraan.